Guddoomiyaha gobolka Mudug Geesey oo iska fageeyey eedaymo ku saabsanaa in uu ku lug lahaa dilkii wasiirkii warfaafinta Puntland.[Akhris …] – Radio Daljir
Galkacyo, Aug 08- Guddoomiyaha gobolka Mudug C/nuur Maxamed Diiriye ‘Geesey’ ayaa iska fogeeyey eedaymo maalmihii ugu danbeeyey loo soo jeedinayey oo ku aaddanaa in uu ku lug lahaa dilkii wasiirkii warfaafinta dawladda Puntland alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac.
Guddoomiyaha oo waraysi gaar ah siiyey idaacadda VOA-da laanteeda Af-Soomaaliga ayaa sheegay in uusan wax lug ah ku lahayn dilkaasi isla markaan uu si aad ah uga xunyahay dhacadadaasi.
Geesey, oo VOA-du ay waydiisay su?aal ku saabsanayd dilka in ay gaysteen rag ka mid ahaa illaadiisa, ayaa sheegay in aysan ka mid ahayn illaaladiisa laakiin waxaa uu xusay in aysan ka fogayn oo uu mid mid u yaqaanno raggii dilka ka danbeeyey lagftigiisanna ay hayb ahaan aad iskugu dhawaayeen nimankaasi.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay hadalkaasi in uu yahay mid lagu doonayo in xaaladda lagu sii xumeeyo, isla markaana lagu damacsan yahay in isaga loo aaaneeyo dilkii wasiirka, taas oo uu sheegay in ay wadaan dad dano gaar ah wata.
Hadalkaan guddoomiyaha ee ku saabsan iska fogaynta eedaymaha loo soo jeediyey ee la xiriira dilkii wasiirka ayaa soo baxaya xilli si weyn loogu tuhunsanaa guddoomiyaha ku lug lahaanshaha arrintaas, waxaan dhowrkii maalmood ee ugu danbeeyey uu ka baxay saaxada siyaasadda gobolka oo markii hore uu ka dhax muuqday.
Dhanka kale guddoomiyuhu waxaa uu ka baaqsaday ka qayb-galka aas qaran oo loo sameeyey wasiirka kaasi oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan mas?uuliyiinta dawladda Puntland sida m/weynaha, kuxigeenkiisa, afhayeenka baarlamaanka, wasiirro, xildhibaano, issimada Puntland iyo dadweyne kale oo aad u tira badan.
Sidoo kale guddoomiyuhu waxaa uusan wali la kulmin madaxda dawladda Puntland ee uu ka mid yahay m/weynuhu kuwaasi oo maalintii sadexaad ku sugan gudaha magaalada Galkacyo, waxaan dhammaan arrimahaasi dhaliyeen tuhun ballaaran oo ku saabsan guddoomiyuhu in uu wax kala socday dhacdadii naxdinta badnayd ee lagu toogtay wasiirkii wrfaafinta dawladda Warsame Cabdi Shirwac.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay xagga dawladda oo muujinaya cidda sida rasmiga ah uga danbeeysay dilkii wasiirka, marka laga reebo hadal haynta noocaan oo kale ah waxaana wali lagu raad-joogaa raggii gaystay dilka kuwaasi oo aan wali gacanta lagu soo dhigin.